Google Oo Bilawday Fahamka Dukaameysiga ... waana Cajiib! | Martech Zone
Google wuxuu bilaabayaa aragtiyaha wax iibsiga… waana wax laga naxo!
Khamiista, Oktoobar 29, 2015 Douglas Karr
Mid ka mid ah ganacsiyada waaweyn ee aan la shaqeynay wuxuu lahaa arrin run ahaantii caan ka ah inta badan ganacsiyada qaranka. Suuq galiyeyaal ahaan, waxaan u jiheysanaa ganacsigeena sidii iyadoo aysan jirin soohdimo juqraafi ama isbeddello waqti ka dib - laakiin xaqiiqadu waxay tahay labaduba inay leeyihiin saameyn aad u weyn. Haddii aad ku qori kartid waxyaabaha ku jira mowduucyada ka faa'iideysanaya xilliyada, isbeddellada guud, iyo juqraafiga, mawduucu si ka wanaagsan ayuu u qaban karaa.
Google ayaa hadda bilaabatay Fahamka Dukaamaysiga halkaas oo aad ku falanqeyn karto mugga raadinta waqtiga iyo cufnaanta juqraafiyeed. Tusaale ahaan, waa kan tusaale baaritaanka dukaameysiga kiniin guud ahaan Mareykanka:
Waxa kale oo aad ku heli kartaa granular cilmi-baaristaada, juquraafi ahaan, illaa heer xaddidan. Tani waxay wax weyn ka tari kartaa qarashyada ku baxa xayeysiintaada iyo shaqsiyeynta xayeysiiskaaga.
Dabcan, waxay sidoo kale bixiyaan raadinta ugu sareysa ee bil iyo sanadka ah ee aad ka dhex baari karto.
Tags: ecommercefahanka googlefahanka wax iibsiga googlearagtida wax iibsiga
Websaydhka X5: Dhis, Dhig iyo Cusbooneysii Goobaha laga soo dejinayo Desktop-ka